June 2021 - San Thitsa
Facebook မှာ Post တင်မှတော်လှန်းရေးလို့ထင်နေရင် ငါကိုလည်း Boycott စာရင်းသာထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ၊ ရဲရင့်အောင်
Zawgyi Facebook မှာ Post တင်မှတော်လှန်းရေးလို့ထင်နေရင် ငါကိုလည်း Boycott စာရင်းသာထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ၊ ရဲရင့်အောင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့
အိမ်ခြံမြေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်သော အရေးကြီးအချက်များ
Zawgyi အိမ်ခြံမြေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်သော အရေးကြီးအချက်များ အိမ်ခြံမြေဝယ်မယ်ဆိုရင်…. မြေတစ်ကွက်ဝယ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ၊ဘာတွေလိုအပ်သလဲ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းသူတို့ သိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စာစုကလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ (၁) ဝယ်ယူမည့် မြေကွက်၏ ဂရံ၊ ပါမစ်၊ စလစ် စတာတွေကို အရင်စစ်ရပါမည်။၄င်းတို့ကိုထုတ်ပေးသည်
အခုလို ပွဲလမ်းသဘင်များတဲ့အချိန်မှာ ငွေကုန်သက်သာတဲ့ အရသာရှိ ကြက်ဆီ ထမင်းချက်နည်း
Zawgyi သင်သာ လွယ်လွယ်ကူကူ အရသာရှိ ကြက်ဆီထမင်း ချက်နိုင်တယ် ဆိုရင် ယုံလား? အခုလို ပွဲလမ်းသဘင်များတဲ့အချိန်မှာ ငွေကုန်သက်သာတဲ့ အရသာရှိ ကြက်ဆီ ထမင်းချက်နည်း ကြက်ဆီထမင်းကတော့ လူကြိုက်များပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ အရာတခုပါပဲ။ ဒီနည်းလေးကတော့ လွယ်လဲလွယ်တယ်။
ရေမွန် ဝတ်ခဲ့တဲ့ အကျီလေးကို ၂၄သိန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တဦး…
Zawgyi ရေမွန် ဝတ်ခဲ့တဲ့ အကျီလေးကို ၂၄သိန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တဦး… တွတ်ပီရဲ့ အကျီ လေးကို လေလံ ကြမ်းခင်းဈေး ၃၂၀၀၀ ကစခဲ့ပါတယ် ဒီအကျီလေးကို တွတ်ပီကဝတ်ထားရင်း လူတစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့တယ်တဲ့ အဲ့ဒီလူက ဒီအကျီလေးကိုလိုချင်တဲ့သူရှိရင်ရောင်းမယ်တဲ့ ရောင်းရပိုက်ဆံကို အမကိုပေးပြီး
Zawgyi ရေနွေးကြမ်း အိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်တွေက အမှိုက်မဟုတ်ဘူးနော် ခြင်ပြေးစေသလို တခြားအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်း ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သောက် သုံးနေတဲ့ ရေနွေးးကြမ်းအိုးထဲ လက်ဖက်ခြောက် တွေက အမှိုက် မဟုတ်ဘူးနော် ခြင်ကို ထွက်ပြေးစေတယ်။ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက် ဖတ်တွေ မလွှင့်ပစ်ဘဲ
အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော သဘာဝနည်းလမ်းများ
Zawgyi အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော သဘာဝနည်းလမ်းများ အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်တော့အောင် ဒါလေးတွေလည်းလုပ် Skin care လည်း ခနခနမပြောင်းနဲ့( တည့်နေရင်မပြောင်းနဲ့တော့)ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ?ဒီအချက်သေးသေးလေးတွေကို လိုက်နာကြည့်ပါ ၁. ရေများများသောက်ပါ. ၂. ဝမ်းမချုပ်စေပါနဲ့ ၃. အဆင်ပြေနေတဲ့ Skincare
Zawgyi အချိုမှုန့်ထက် အဆတစ်ရာ ကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးမထိခိုက်တဲ့ သဘာဝဟင်းခပ်မှုန့်လုပ်နည်း အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ အခုခေတ်မှာ ကြက်သားအမှုန့်ဆိုတဲ့ ဈေးချိုချို အထုပ်တွေဟာ နေရာယူလာပါတယ်။ အချိုမှုန့်အစားထိုးသုံးကြပေမယ့် ရောင်းတန်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဟာလည်း အချိုမှုန့်တွေ နည်းနည်းပါနေသေးတယ်ဆိုတဲ့
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ရေမွန် (IDIOTS) ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
Zawgyi နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ရေမွန် (IDIOTS) ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး Idiots Band ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် ရေမွန်၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို ယနေ့၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေမွန်ဟာ
Zawgyi လူတိုင်း ခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့ကာလမျိုးမှာတောင် ကားပေါ်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်းတစ်ရာကို ရိုးရိုးသားသား ပိုင်ရှင်လက် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သူ ခရီးသည်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်းတစ်ရာကို သွားရောက်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်း ကိုအောင်ကြီး တက္ကစီယာဉ်မောင်း ကိုအောင်ကြီးက သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာ စီးလာတဲ့ ခရီးသည် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ငွေကျပ်သိန်း
Zawgyi အဆိုတော်ရေမွန်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်အမှတ်တရလေးများ ရော့ခ်ဂီတအဆိုတော် တဦးဖြစ်သည့် ရေမွန်သည် (ဇွန် ၂၃ ရက်) နံနက်ပိုင်းတွင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးသွားကြောင်း အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အဆိုတော် ရေမွန်သည် ငှက်ဖျားရောဂါပိုး